शारिरिक सम्वन्ध राख्दा वा किस खाँदा कोरोना भाइरस सर्छ कि सर्दैन ? जानिराखाैँ |
काठमाडौं- कोरोना भाइरस कपालको रौंभन्दा ९ सय गुणा सानो हुन्छ । यसकारण यसले मानिसलाई सजिलै आफ्नो सिकार बनाउँन सक्छ । कोरोना भाइरस विश्वका ८० देशमा फैलिइसकेको छ । आखिर कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ ?
कोरोना भाइरस कुनै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रवक्ताका अनुसार कोरोना भाइरसबाट पीडित व्यक्तिभन्दा कम्तीमा पनि तीन फिट टाढा रहनुपर्छ । तर द सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले जारी गरेको सूचनामा पीडितभन्दा ६ फिट टाढा रहनुपर्ने उल्लेख छ ।
बस, रेल या कुनै सार्वजनिक स्थलमा कोरोना भाइरस भएमा त्यहाँबाट फैलिने खतरा हुन्छ । हङकङको सेन्टर फर हेल्थले एक बौद्ध मन्दिरमा आएका केही श्रद्धालु यसैकारण कोरोना संक्रमित भएको बताएको छ ।
कुनै कोरोना पीडित व्यक्ति आफैंले हातले खाना खाएको वा कम ठाउँमा धेरै मानिस खाना खान जम्मा भएमा पनि कोरोना भाइरस फैलिने खतरा हुन्छ । यद्यपि तातो खानामा कोरोना भाइरस निष्क्रिय हुनसक्छ । विश्व स्वास्थय संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना भाइरस ‘से-क्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज’ अर्थात यौ-न सम्बन्धबाट सर्ने रोग होइन ।
त्यसकारण यौ-न सम्बन्ध राख्दैमा कोरोना भाइरस सर्दैन । तर यौ-न सम्बन्धका क्रममा जुन यौ-न क्रिडा हुन्छ, त्यो निकै खतरनाक हुनजान्छ । पीडित व्यक्तिलाई किस गरेको खण्डमा कोरोना भाइरस सर्ने अधिक सम्भावना हुन्छ ।